မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - သိုး Anti-ပင်ပန်းနွမ်းနယ် Mat Co. , Ltd
AHOME တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြီးမှသာ Anti-ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဖျာ၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့ဦးဆောင်ဂျာမန် (TUV) အီးလက်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများဖြတ်သန်းပါတယ်။
153 န်ထမ်းလုံးဝ, 20 ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & D အသင်း,5အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာနှင့် 20 ရောင်းအားကလူ။ ထုတ်ကုန်၏ 90% ဖြစ်သောအမေရိကား, ဂျပန်, တောင်ကိုရီးယား, ကနေဒါ, ဥရောပ, တောင်အမေရိက, သြစတြေးလျနှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ် 50 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှရောင်းချကြသည်။
AHome တစ်ဦးကိုလစဉ်အသစ်ကထုတ်ကုန်-အဓိကအားချမှတ်ပြားချပ်ချပ်ရပ်စားပွဲခုံဖျာ, စံရပ်နေစားပွဲပေါ်မှာဖျာများနှင့်အဆက်မပြတ်တိုင်းလူတစ်ဦးမှထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုပြန့်နှံ့သည်ဖောက်သည်နှလုံးမရှိကြပေ။ ပြည့်စုံ AHome အမှတ်တံဆိပ်ဖွဲ့စည်း "အကျိုးရှိစွာနှစ်သိမ့် Create" ။
အဆိုပါ AHome အဓိကထုတ်ကုန်ကဘာတွေလဲ?
AHome ဒါပေါ်ပြားချပ်ချပ် & ပြားချပ်ချပ်ရပ်စားပွဲခုံဖျာ, မီးဖိုချောင်နှစ်သိမ့်ဖျာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖျာ, ခွဲစိတ်ကြမ်းပြင်ဖျာနှင့်ဆံဖျာနှင့်မကုန်ထုတ်လုပ်ရေး, စျေးကွက်နဲ့ R & D ကိုအထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကို AHome ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြု & လျှောက်ထားနိုင်သနည်း
ဆန့်ကျင် - ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဖျာ ဒူးနှင့်လည်ပင်းဒဏ်ရာနှင့်နာကျင်ခြင်း, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နောက်ကျောကိုလျော့ချဖို့သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာ-စက်မှု, လက်လီ, ပင်မစာမျက်နှာ, ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း, မေးလ်အခန်းများ, ကောင်တာ, စိုစွတ်ဒေသများ, etc
အမှတ် 158, Tong'an ဥယျာဉ်, Tong'an စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဗဟိုဇုန်, Tong'an ခရိုင်
အသားပေးကုန်ပစ္စည်းများ - ပူ Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
Office Anti Fatigue Mat, desk Anti-ပင်ပန်းနွမ်းနယ် Mat, သားရေ Desk Mat, Pvc Anti Fatigue Mat, Ergonomic Office Floor Mat, Anti Fatigue Mat Kitchen Floor,